Loo yaqaanay "King of Pop" ee Michael Jackson waa heartthrob ee music taageere oo dhan ku baahsan dunida dacaladeeda. Wuxuu ku dhashay on 29th of August, 1958 in Gary Indiana, qoyska African American, Michael Joseph Jackson ahayd 8-da oo ka mid ah 10-kii caruur. Hooyadiis Katherine Esteer Scruse ahaa nin cibaadaysan buu Rabbiga Witness iyo aabihiis Yuusuf Walter "Joe" Jackson ahaa feeryahanka hore iyo shaqaale birta ee US Steel.
Sida ilmo 5 sano, Michael Jackson sameeyay sida vocalist hogaanka group-ka dhisan ee qoyska Jackson. Walaalaha ah ee Jackson noqday xubin ka tirsan kooxda oo sameeyay Jackson 5. Wajiga hore si aad u hesho wanaagsan socda Jackson 5 ciyaaray Bilash maxalliga ah iyo xitaa diiwaan hal hal "Boy Big" iyo "Waxaad is badalada" on b-dhinac, oo ma uu karin inuu maslaxadaha dadwaynaha badan. Dheeraad ah oo ku saabsan Jackson 5 sidoo kale shaqeeyay furitaanka falalka Sam iyo Dave, Gladys Knight oo Ku guulaystay iyo kuwa kale. Sannaddii 1968, Berry Gordy saxiixay Jackson 5 ee uu calaamad. Markaa ka dib, waxay u guureen Los Angeles oo la sii daayay ay hore album "Diana Ross bandhigidda Jackson 5 ee" kaas oo ka dhacay gooldhalinta December ee sannadkan in. Waxay ugu horeysay hal "Waxaan doonayaa inaan idin ​​Back" waxa uu ahaa tiro ka mid hit 100 boor Hot shaxda in January 1970 taasoo ay sii raacday kali ka badan in kaalinta shaxda sida "waxaa waxaan noqon doonaa", "ABC", "The Love Waxaad Save "iyo kuwa kale.
Arrintan oo uu weheliyo uu shaqada la Jackson 5, Michael Jackson mustaqbalkiisa ciyaareed ka bilaabay Solo da'da 13 iyo sannaddii 1971 uu ka dhacay gooldhalinta la "Got si Waxaa jiri" la isku album magaca. Sannaddii 1972-ka, tirada ugu horeysay Solo 1 of Jackson ahaa Balcad eponymous ku saabsan rat ka album Ben. Waxa ay ahayd in 1980 in Michael Jackson noqday magac caan ah oo ku saabsan muusiga loo jecel yahay. Waxaa jiray videos badan oo ka mid ah heesaha sida "garaacday", "Thriller", "Billie Jean" iyo kuwa kale oo ka qarxay caqabadaha jinsiyadeed iyo sidoo kale MTV ee cusub caan ah. Inta 1990, Michael Jackson ayaa lagu yaqaanaa in la uunana socod fanaaniinta Solo iyo sidoo kale yayna la videos sida wabatay. Moonwalk iyo qoob ka Robot farsamooyinka by Jackson sii sameeyey isaga ka mid ah dadka caanka ah.
The 1982 "Thriller" Waa album ugu wanaagsan ee lagu iibiyo ee Michael Jackson, halka qaar ka mid ah album caan ah oo kale waxaa ka mid ah Off ku Wall, Taariikhda, Bad iyo khatarta ah.
1. xaqiiqooyinka ku saabsan Michael Jackson
2. Top 10 Qaasaali ee Michael Jackson si Download
3. Top 20 music video ee Micheal Jackson
4. Top 20 Songs ee Michael Jackson si Download
5. Download music free la TunesGo ka internet
Qaar ka mid ah xaqiiqooyinka ku saabsan Michael Jackson
Michael Jackson waa mid ka mid ah fanaaniinta aad u yar ayaa lagu degmnada in Rock iyo Roll Hall of Fame laba jeer
Isagu waa sidoo kale qoob ka keliya ee ka gabbaad ah iyo music pop oo lagu soo daray dhowna Hall of Fame oo Dance Hall of Fame
Waxa uu helay badan Guinness Book Records, Grammy Lifetime Achievement Award, 13 Grammy Awards, Grammy Legend Award, 26 American Music Awards, oo Artists qarniga, 13 ka mid kali Maraykanka ee iyo qaar badan.
Iibinta qiyaasay Michael Jackson waa ku dhawaad ​​400 oo malaayiin dunida oo dhan
Michael Jackson waa fanaaniinta duubo ugu abaal taariikhda music caan ah
Isagu waa fanaaniinta ugu horeysay u leedahay in 10-hal sare ee boor Hot 100 ee 5 sano ee kala duwan
Sannadkii 2000, Guinness World Records isaga siiyey aqoonsi ah taageeridda 39 hay'adaha samafalka ah.
Bishii August 1994, Michael Jackson ku dhawaaqay in uu is qaba icon Elvis Presley gabadhii Lisa Marie Presley laakiin guurka ahaa muddo yar sidii ay furay sanadkii 1996. Markaa ka dib sanadkii 1996 wuxuu guursaday Debbie Rowe oo ahaa kalkaaliye caafimaad oo wuxuu lahaa laba caruur ah oo iyada iyada oo shahwo aan dabiici ahayn. Sannaddii 1997, Wiilka Michael Joseph "amiir" Jackson Jr uu ku dhashay halka sannaddii 1998, gabadhiisa Paris Michael Jackson Katherine waxa uu ku dhashay. Sannaddii 1999 Rowe iyo Michael Jackson ayaa sidoo kale helay furay qaadan haynta carruurta. Michael Jackson ayaa sidoo kale la hadli lahaa oo ku saabsan ilmahaaga uu saddexaad magaca Prince Michael "Buste" Jackson II oo ahaa la-gaadh ah oo aan la garanayn.
Murma u badan ayaa waxaa sidoo kale ku lifaaqan yahay nolosha ee Michael Jackson. In bartamihii sanadka 1990 uu ku eedeeyay xad-gudub ilmaha galmada laakiin kiiska ayaa markii dambe waxaa lagu xalliyaa maxkamadda dibaddeeda. Sannaddii 2005 uu mar kale lagu waayay xadgudubka galmada caruurta iyo kharashyada kale. On 14th of June 2005, uu waayay dhammaan eedihii laakiin markaas uu sumcad Silec badan oo dhaqaalaha uu helay hit weyn. The biilasha sharciga ah ee Michael Jackson ahaayeen si sare in aanay jirin dheelitirka bangiga iyo Dhawa uu heystay lacag uu sidan kharashka uu lagama maarmaan ah.
Waxa uu ahaa isku diyaarinaya inuu taxane riwaayad soo laabtay kaas oo cinwaankeedu yahay "Tani waa Waxa" iyo inta lagu jiro waqtigan on 25 oo wuxuu u dhintay June 2009 at 50 jir ay sabab u qabtay wadnaha ka dib markii propofol ba'an iyo sarkhaan Benzodiazepin. Dhimashadiisu garoomada ku dhiigle ah oo ay Los Angeles County Coroner iyo Cornad Murray oo ahaa inuu physican shakhsi lagu helay ulakac ah aan ikhtiyaarka lahayn. Inuu dhimasho kadis ah oo dhan adduunka music iyo taageerayaasha ayuu u barooranayay.
Top 10 Qaasaali ee Michael Jackson
2 Khatarta Download Link
4 Taariikhda: Hore, ee hadda iyo mustaqbalka, Kitaabka I Download Link
5 Loogama badin Download Link
6 Derbiga Download Link
7 Dhiigga ku Floow Dance ah Download Link
8 King of Pop Download Link
9 Ee Muhiimka ah Michael Jackson Download Link
10 Ka helay inaan halkaas Download Link
Top 20 music video ee Micheal Jackson
3 Aad dareemi kartaa Download Link
4 Wabatay Download Link
5 Dambiyada siman Download Link
6 Rux Kula Download Link
7 Garaacday Download Link
8 Daa aniga Download Link
9 Black Or White Download Link
10 Yaa Ma Waxa Download Link
11 Ha joojin 'Til Waxaad ku filan Download Link
13 Waxaad dhahdaa waxaad dhahdaa waxaad dhahdaa Download Link
14 Waxay ha ina daneeyaa Download Link
16 Man In Mirror Download Link
17 Waxay Out of noloshayda Download Link
18 Xasuuso Waqtiga Download Link
19 Xasee Download Link
20 Saacadda Download Link
Top 20 Songs ee Michael Jackson
2 Ha joojin 'Til aad ku filan u hesho Download Link
4 Man In Mirror Download Link
5 Garaacday Download Link
6 Rux aad Iyada Download Link
7 Bogsii World ayaa Download Link
8 Keligaa ma tihid Download Link
9 Aad jiri doonaan Download Link
10 Xasuuso Waqtiga Download Link
11 Sida aad ii dareemaan Download Link
14 Waxaad dhahdaa waxaad dhahdaa waxaad dhahdaa Download Link
15 Black iyo White Download Link
16 Doonayaa in ay bilaabato Wax Download Link
17 Dambiyada siman Download Link
18 Waxaad My adduunka Rux Download Link
19 Wabatay Download Link
> Resource > Video > About Michael Jackson oo 10-Qaasaali ee Michael Jackson